မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး အပိုင်း (၄) | Food Magazine Myanmar
by Ko Win Zaw for Food Magazine
လစဉ်ရေးသားနေတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများမှ ကျန်ရှိသေးလို့ အသင့်တော်ဆုံး ပစ္စည်းများကို ထပ်မံတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် မီးဖိုချောင်မှာ လုပ်မယ့်သူများအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုမှာပါ။ ယခု ရေးသားတင်ပြမှာကတော့ 25. Refrigerator 26. Wok 27. Sieve 28. Conical Strainer 29. Stove 30. Chopping Board 31. Tin Opener 32. Plastic Wrap တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
25. Refrigerator (ရေခဲသေတ္တာ)
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ရေခဲသေတ္တာကတော့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အသား၊ ငါးနှင့် အသီးအရွက်တွေ ကြာကြာသုံးလို့ရတာပါ။ ရေခဲသေတ္တာမှာလည်း အသီးအရွက်တွေ သိမ်းဆည်းထားသိုတဲ့ နည်းနည်းသာအေးသော Fridge နှင့် အသား၊ ငါးတွေ ကြာရှည်ခံအောင်သိမ်းတဲ့ ရေခဲအထိအေးသော Freezer ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ မိမိအိမ်မှာပဲ သုံးမယ်ဆိုလျှင်တော့ နှစ်မျိုးစလုံးတွဲပါတဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို သုံးနိုင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်နှင့် ဟိုတယ်တွေမှာဆိုလျှင်တော့ ခွဲခြားသုံးမှ ပိုပြီး အဆင်ပြေမှာပါ။
26. Wok (အကြော်ဒယ်အိုး)
တရုတ်အစားအစာတွေ ကြော်မယ်၊ ချက်မယ်ဆိုလျှင်တော့ ဒီအကြော်ဒယ်အိုးနှင့်ဆို အလွန်ထိရောက်လို့ နေရာတော်တော်များများမှာ သုံးနေကြတာပါ။ ဆီပူထဲ နှစ်ပြီး ကြော်မယ်ဆိုလျှင်လည်း သုံးလို့ရသလို လှော်စရာတွေရှိရင်လည်း လှော်လို့ရပါတယ်။
27. Sieve (ဆန်ခါစိပ်)
ဒီဆန်ခါစိပ်ကလည်း ဂျုံမှုန့်တွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ လိုသလို ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အကြမ်း၊ အချောခွဲတဲ့နေရာမှာလည်း သုံးပါတယ်။ အဓိကကတော့ မုန့်လုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတာပါ။
28. Conical Strainer (ကတော့ပုံ ဆန်ခါ)
ဒီကတော့ပုံ ဆန်ခါကတော့ စည်သွတ်ဘူးတွေ၊ အရည်နဲ့ အဖတ်ခွဲတဲ့ အခါမှာဖြစ်စေ၊ ဥရောပဟင်းချိုချက်လျှင် စစ်ယူတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ အလွန်အသုံးတည့်ပါတယ်။ အသီး၊ အရွက်တွေ ရေဆေးပြီးတဲ့အခါ ရေစစ်ဖို့လည်း သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။
29. Stove (မီးဖို)
ဒီမီးဖိုကတော့ တစ်ဖိုတည်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဖိုဖြစ်စေ၊ လေးလုံးတွဲဖြစ်စေ ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးဖိုရှိသလို ဂက်စ်မီးဖိုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သယ်ယူရတာလည်း လွယ်ကူတော့ မည်သည့်နေရာပဲသွားသွား ယူသွားလို့ အဆင်ပြေတာပေါ့။
30. Chopping Board (စဉ်းတီတုံး)
စဉ်းတီတုံးကတော့ အသားပဲခုတ်ခုတ်၊ အသီးအရွက်ပဲလှီးလှီး မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းက သစ်သားတွေကိုသာသုံးပြီး ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပလတ်စတစ် သားတွေနဲ့ အရောင်မျိုးစုံကို သုံးကြပါတယ်။ အဲဒီစဉ်းတီတုံး တုံးပြားကို Cutting Board လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
31. Tin Opener (စည်သွတ်ဘူးဖောက်တံ)
မီးဖိုချောင်ထဲမှာဆိုလျှင် ရိုးရိုးအသား၊ ငါးတွေတင်မကပါဘူး။ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ စည်သွတ်ဘူးဖြစ်စေ၊ မိမိနိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ စည်သွတ်ဘူးဖြစ်စေ သုံးကြပါတယ်။ စည်သွတ်ဘူးတွေကို ဖွင့်ဖို့ကလည်း ဒီဖောက်တံလေးနဲ့မှ ပို၍ အဆင်ပြေစေပြီး လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ပါတယ်။
32. Plastic Wrap (ပလတ်စတစ်လိပ်)
ဒီပလတ်စတစ်လိပ်ပြားကတော့ အသားတွေထုပ်ပိုးတဲ့နေရာမှာ မြန်ဆန်ပြီး သုံးရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ အသီးအရွက်တွေကို စည်းပတ်ရင်လည်း အကျိုးရှိရှိ သုံးလို့ ရပါတယ်။ အစားအစာတွေရဲ့ အနံ့အသက်ကို ပြင်ပမထွက်အောင် ဖုံးအုပ်ပြီး ပိတ်လို့ရသလို ယင်မနားအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကဲ… ဒီလောက်နှင့်ပဲ ကျေနပ်ကြပါတော့။ ကျန်ရှိတာတွေကိုတော့ နောက်လမှပဲ ကြည့်ကြရအောင်နော်။